Nahazo ny loka Google Digital News Initiative ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jolay 2019 6:22 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Български, বাংলা, Deutsch, English
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Aprily 2016)
Faly aho mizara ny vaovao fa nahazo ny loka Google Digital News Initiative ( Hetsiky ny Vaovao Nomerika Google) ny Global Voices !
(Mbola eo am-pifampiraharahana ny fe-potoana farany izahay) Tetikasa maharitra roa taona hiasana miaraka amin'ny Media Cloud, ilay fitaovana fikarohana manokana izay manampy ireo mpikaroka hamaly fanontaniana maro sy mahaliana momba ny fampitam-baovao anaty aterineto izy ity. Manangona ireo loharanom-baovao an'hetsiny ny Media Cloud ary manome alalana ny mpisera handefa fanontaniana mba hahitana ny fironana amin'ny resadresaka sy vaovao an-tserasera – hanampiana antsika hahita ny lamin'asa amin'ny fanoritan-joro sy ny fametrahana ny fandaharam-potoanan'ny vaovao.
Fitaovana hijerena ny angondrakitra ao amin'ny Media Cloud
Tetikasa iraisan'ny Berkman Center for Internet & Society sy ny MIT Media Lab ny Media Cloud ary tetikasam-pikarohana maharitra tarihan'i Ethan Zuckerman, izay iray amin'ireo mpiara-manorina ny Global Voices ihany koa. Nandrakitra sy nandalina ny tantaran'ny Global Voices nandritra ny taona maro tao anatin'ny asany i Ethan sy ireo mpiara-miasa aminy.
Ny mamantatra ny fisesin'ny famoahan-dahatsoratra sy ny fametrahana fitaovana hitoerana ao amin'ny Media Cloud, mba hanampiana antsika hampiditra ny fahaizantsika mikaroka amin'ny fanoratantsika lahatsoratra tsy tapaka no tanjontsika amin'ity tetikasa ity. Manamafy izahay fa mifantoka amin'ny tantara tsy misy mpitatitra sy tsy aseho araka ny tokony ho izy, ary afaka manohana izany filazana izany isika rehefa mahazo ny angondrakitra tsara. Miankina amin'ny fandraisana anjara tsindraindray avy amin'ireo namana mpahay siansa momba ny angondrakitra mba hanaovana ny fandresendahatra no fanamby atrehinay. Manantena isika fa hanampy antsika ny tetikasa hanovona ny angondrakitra ho ao anatin'ireo filazana tantaraina sy voamarika momba ny endriky ny fampitam-baovao manerantany ary mba hahitana mazava kokoa ny anjara asantsika sy ny tara-pisarihantsika.
Ny volana manaraka, niandrandra ny hiara-hiasa akaiky tamin'ny vondrom-piarahamonina GV amin'ny fananganana ity tetikasa ity izahay raha vao voasonia ny loka. Raha liana te hahafantatra bebe kokoa momba izany ny mpikambana dia nanoratra na nandefasa hafatra ao amin'ny lahatsoratra teny anglisy hanombohana ny adihevitra. Ny fivoriana fikaonan-doha fohy niaraka tamin'i Sands Fish , namana akaiky ny GV, izay niara-niasa tamin'i Ethan tao amin'ny MIT Media Lab ary hiara-hiasa amintsika hamolavola sy hanangana ny fitaovana Media Cloud sy ny fidirana amin'izany no nanombohantsika azy.